काठमाडौंबाटै कर्णालीको जागिर : काठमाडौंमै बसेर कर्णालीको र्दुगम भत्ता असुल्छन् पदाधिकारी !
ARCHIVE, NEWSPAPER » काठमाडौंबाटै कर्णालीको जागिर : काठमाडौंमै बसेर कर्णालीको र्दुगम भत्ता असुल्छन् पदाधिकारी !
जुम्ला - कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान जुम्लाको मेडिकल कलेजका लागि जग्गा प्राप्तिको बहाना बनाएर उपकुलपति डा. राजेन्द्रराज वाग्ले असार दोस्रो साता काठमाडौं गए । अस्पताल निर्देशक धर्मराज गोसाईलाई साथमा लिएर उनी काठमडाौं तर्फ लागेको एक साता नवित्दै रजियट्रर विश्वराज काफ्ले पनि एकेडेमि डिन प्राधयापक डा.मोदनाग मराठलाई लिएर जग्गा प्राप्तिको निहुँमा काठमाडौतर्फै लागे । तर, प्रतिष्ठानलाई जग्गा प्राप्त भएन ।
प्रतिष्ठानका जग्गा प्राप्तिका लागि आएको ९७ लाख रुपैयाँ फिज भयो । विभिन्न बहानामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी काठमाडौंमा केन्द्रित भएपछि जुम्ला शिक्षण अस्पताल पदाधिकारीविहीन छ, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।